Isibhicongo kubhubha abawu-16 engozini - Ilanga News
Home Izindaba Isibhicongo kubhubha abawu-16 engozini
Izidumbu bezisakazeke umgwaqo ngasoLundi
kubhubhe abawu-16 engozini eyenzeke ku-R66 ngaphandle kwasoLundi izolo ngoLwesithathu.
IDLULE emhlabeni nabawu-16 okuhlanganisa nosana obelungakazalwa, inhlekelele yengozi eyenzeke ku-R66 ngaphandle kwasoLundi izolo ngoLwesithathu ngezithuba zabo-8 ekuseni.
Abahambele indawo yesigameko bebehluleka ngisho ukuchaza isimo abasifice kule ndawo, njengoba kuthiwa besibondwe sayekwa. Abaningi bathe selokhu bazalwa kabakaze bayibone into enjeya kwazise ezinye izisulu zishe zangqongqa, kanti izidumbu zabanye bezidindilize ngaphandle, zasakazeka emgwaqweni.
UMnu Mnumzana Zakwe onguSihlalo kasoseshini wamatekisi waKwaNongoma, utshele ILANGA esendaweni yesigameko ukuthi bakhungathekile yilesi sigameko. Nokho uthe abakutholile komunye wababili abasindile, wukuthi iloli liphume emzileni walo, laqonda ngqo etekisini abebekuyona.
“Okwamanje kakukacaci kahle ukuthi umshayeli weloli uhlaselwe wubuthongo noma kukhona okumphazamisile yini. Oyedwa kulaba ababili abasindile abebesetekisini, utshele abosizo oluphuthumayo ukuthi iloli liqhamuke ekhoneni seliqonde ngqo etekisini kungasekho obekungenziwa ngumshayeli (wetekisi) naye olahlekelwe wumphefumulo wakhe kule ngozi,” kusho uMnu Zakwe.
Uthe njengososeshini, banxusa umasipala nomnyango wezokuthutha esifundazweni ukuba kube khona into oyenzayo ngale ndawo okwenzeke kuyona ingozi, kwazise uthi nasezinyangeni ezimbalwa ezedlule kuke kwaba nenhlekelele endaweni efanayo.
Imenenja kumasipala wasoLundi, uMnu Nkosenye Zulu, uthe selokhu azalwa akakaze ayibone into enyantisa umzimba njengengozi yayizolo.
“Ngihambe ngayofika lapho okwenzeke khona isigameko, kanti kangikaze ngiyibone into enjeya. Abantu abebekule ngozi bashone kabuhlungu. Abanye babo bebeshe kabi, bengasabonakali, izidumbu ezinye zisakazeke phansi, zigcwele umgwaqo wonke. Owesifazane obekhulelwe ulimale wavuleka isibeletho usana obelungakazalwa lwaphumela ngaphandle, selushonile,” kusho uMnu Zulu.
Uqhube ngokunxusa umnyango wezokuthutha kulesi sifundazwe ukuba uqinise imithetho kubashayeli bamaloli, ikakhulukazi labo abahamba ngalawa adonsa izinqola ezinkulu, babheke kakhulu abathole amalayisensi emazweni angaphandle.
“Siyaqonda ukuthi izinkampani eziningi ziqasha abashayeli basemazweni angaphandle ngoba beshibhile, kodwa siyacela kuqine imithetho ukuqinisekisa ukuthi izincwadi zabo ziqondile.
“Izinkampani eziqasha abashayeli abangakulungele ukuhamba amabanga amade kumele nazo zijeziswe. Njengomasipala wasoLundi siyazwelana kakhulu nemindeni elahlekelwe yizihlobo zayo,” kusho uMnu Zulu esitatimendeni.
I-IFP ephethe umasipala wasoLundi, ithe: “Izithombe zemizimba ebezibonakala zigcwele umgwaqo zinyantisa igazi. Sinxusa abashayeli ukuba bashayele ngokucophelela emigwaqweni. Siyaqonda ukuthi abanye abebekule tekisi ngabantu ababhekelela imindeni.
“Kuyakhathaza ukuthi sisaqhubeka nokulahlekelwa yimiphefumulo yabantu abaningi ngalolu hlobo emigwaqweni ekubeni le nyanga esikuyona ithathwa njengeyezokuthutha.”
Kuzokhumbuleka ukuthi kwenzeka le nhlekelele nje, ngoMgqibelo bekufihlwa amalungu awu-13 omndeni wakwaMndali, eKiliman, eBulwer, nawo adlula emhlabeni engozini yemoto.
Okhulumela amaphoyisa KwaZulu-Natal, uColonel Thembeka Mbhele, uthe kuvulwe icala lokubulala ngokungenhloso. Uthe amaphoyisa aphenya ngokufa kwabantu abawu-16 kule ngozi.
“Abawu-5 abalimele baphuthunyiswe esibhedlela,” kusho uColonel Mbhele.
Previous articleInjabulo kubuya izethenjwa ze-Chiefs
Next articleWagqugquzelwa ngumlimi angamazi